सरकारको परीक्षाको घडी | eAdarsha.com
१. नेपालीहरु अहिले द्रूततर गतिले विकास निर्माणतिर लाग्नुपर्ने बेला हो। हाम्रा प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको प्रेरणाप्रद नारा अघि सारेका छन्। त्यो नारालाई व्यवहारमा ल्याउन सरकारले अनेक प्रयास गरेको छ। तर पनि हाम्रो ध्यान विकासतिर भन्दा अन्ततिर गएको छ।
२. अहिले आएर हामीले नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा गायव गरिएको थाहा पाएका छौँ। नेपाली भूभाग धेरै खुम्चिएको चाल पाएका छौं। धेरै नेपाली स्तब्ध भएका छन्। हामी आफूलाई राष्ट्रवादी भनेर कहिले थाक्दैनौं। तर नेपालको भूभागमा धमिराले खाएको चालै पाउँदैनौँ।
३. हामीले कतिपय नेताहरुलाई राष्ट्रवादी भनेर सम्मान पनि गर्‍यौं। सरकारी कर्मचारीहरुलाई पुरस्कृत पनि गर्‍यौं। तर उनीहरु कसैले पनि नेपाली भूभाग कहिलेदेखि कसरी खुम्चेर गयो भन्ने कुराको रहस्योद्घाटन गरिदिएनन्। जसको कारण आज हामी स्तब्ध हुनुपर्ने अवस्था आएको छ।
४. काठमाडौंमा ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले लिम्पियाधुरा खोर्इ भनेर सरकारको नापी विभाग अगाडि बालेर धर्ना बसेका छन्। वषौर्ंदेखि हामीले लिम्पियाधुरा नभएको नक्सालाई आफ्नो अध्ययनको माध्यम बनायौं। सरकारी कार्यालयहरुमा पनि त्यसैलाई टाँगेर सजाउने गरियो।
५. यसैबेला नवलपरासी जिल्लाका सुस्तावासीहरु पनि भारतले आफ्नो बाटो रोकिदिएको र आफ्नो लालपूर्जा भएको जग्गामा आएर बाटो बनाउन लागेको आदि गुनासो गर्दै काठमाडौं पुगेका छन्। सुस्तावासीहरु पटक-पटक काठमाण्डौं धाउने गर्दछन्। त्यसरी धाउँदा कतिपयको ज्यान नै पनि गएको छ। तर उनीहरुको मागमा सुनुवाइ भएको छैन।
६. हाम्रा नेताहरु अरुहरु विषय आउँदा अनेक व्याख्या गरेर लामा-लामा भाषण गर्दछन्। तर जब नेपाली अखण्डताको कुरा आउँछ। नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको कुरा आउँछ तब उनीहरुको स्वर सुक्छ। त्यस विषयमा उनीहरु बोल्दैनन्, बोल्न सक्दैनन्। तैपनि उनीहरु आफूलाई राष्ट्रवादी भनाउन भने पछि पर्दैनन्।
७. शासन-प्रशासनमा बस्नेहरुको त्यस्तै प्रवृत्तिले देश क्रमशः खुम्चदै गएको छ। देश खुम्चदै छ, तर नेताहरु, सरकारमा बस्नेहरु त्यसलाई प्राथमिकता दिदैनन्। हामी मातृभूमिलाई प्राणभन्दा प्यारो भन्छौं। प्राणभन्दा प्यारो हो भने यो विषयलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ। यस्तो संवेदनशील विषय आएको बेला कानमा तेल हालेर बस्ने बेला होइन। यसमा सबै जागरुक हुनुपर्दछ। त्यसमा पनि सरकारले तुरुन्त कदम चाल्नु पर्दछ। यो सरकारको परीक्षाको घडी पनि हो।